မောင်တောဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေး အကူအညီများပေးရန် နော်ဝေးသံအမတ်ကြီးက ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကို တွေ့ဆုံ | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section » Regional » မောင်တောဒေသပြန်လည်ထူထောင်ရေး အကူအညီများပေးရန် နော်ဝေးသံအမတ်ကြီးက ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကို တွေ့ဆုံ
နော်ဝေးသံအမတ်အဖွဲ့နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတို့ တွေ့ဆုံနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ − စံမြတ်ရွှေ)
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေး သံအမတ်ကြီး Ms. Tone Tinnes ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် စက် တင်ဘာ ၁၃ ရက်က စစ်တွေမြို့ ရှိ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီး ချုပ် ဧည့်ခန်းမနှင့် ပြည်နယ်လွှတ် တော်ရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဧည့်ခန်းမတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် မောင်တောဒေသ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်စဉ်ကို ရှုတ်ချ၍ ကိုဖီအာနန် ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာကို အားပေးထောက်ခံသည်ဟု နော်ဝေးသံအမတ်ကြီးက ပြောကြားကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးမင်းအောင်၏ တရားဝင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင်လည်း နော်ဝေးနိုင်ငံ အနေဖြင့် အကြမ်း ဖက်မှုလုပ်ရပ်များကို မထောက်ခံ ဘဲ ရှုတ်ချကြောင်း၊ လက်ရှိဒုက္ခ ရောက်နေသူများကို အကူအညီ ပေးလိုသော်လည်း သွားလာရေး အခက်အခဲအချို့ ရှိနေသည်ဟု ပြောကြားကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံကျော်လှက ပြောကြားသည်။
‘‘အခုဖြစ်နေတဲ့ နှစ်ဖက်လူ တွေကို အကူအညီပေးချင်တယ်။ သို့သော် သွားဖို့အတွက် အခက် အခဲဖြစ်နေတယ် ဆိုတာတွေကို ပြောတယ်။ လွှတ်တော်အနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလဲမေး တယ်။ ဒီအစီအစဉ်တွေက အစိုးရ အဖွဲ့နဲ့ဆိုင်တယ်။ အစိုးရအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်မယ့် အစီအစဉ်တွေ ကို လွှတ်တော်ကို မချပြသေးတဲ့ အတွက် မသိရသေးဘူးလို့ ပြန် ဆွေးနွေးခဲ့တယ်’’ဟု ဦးစံကျော်လှ က ဆိုသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌထံသို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီး HE. Mr. Peter Lysholt Hansen ဦးဆောင်သော အဖွဲ့လည်း လာရောက် တွေ့ဆုံကာ မောင်တောဒေသအ ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဦးစံကျော်လှက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဩဂုတ် ၂၅ ရက် က မောင်တောခရိုင်ရှိ ရဲစခန်း ၃၀ ကျော်ကို (ARSA) အကြမ်းဖက်သမားများက စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် ဒေသခံသောင်းနှင့်ချီ ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည်။